Ministri Ahụike zụrụ Onye na-enyocha enyemaka | RayHaber | raillynews
HomeGeneralỌrụMinistri Ahụike zụrụ Onye na-ahụ maka nyocha
06 / 12 / 2019 Ọrụ, General
na-enyere aka na ahụike maka ahụike ka ịzụrụ ihe
Nkwupụta nke Onye Nleba Anya nke Inye Nleba Anya si na Nnyocha Nnyocha nke Ministry of Health; A ga-eme nyocha nke ntinye aka na nyocha nke nnyemaaka maka ndị na-ahụ maka 16 (iri na isii) na klas ọrụ nlekọta ọrụ dị n'etiti ụbọchị 20-31 / 01 / 2020 ga-arụ ọrụ na Kọmitii Na-ahụ Maka Ahụ Ike.
I. IKPERE MAKA ANYI NA ANARA NA AKARA GARARA NA EGO
Ndị chọrọ ịme nyocha Ntinye akwụkwọ ga-emerịrị ihe ndị a:
a) Iji mezuo ọnọdụ izugbe edepụtara na ederede 657 nke Civil Servants Iwu Nke 48
b) Inwe akwukwo site na komputa, ulo oru na injinia nke obodo nke ikike nke onodu aku na uba na oru nchịkwa, sayensi ndoro-ndoro ochichi, iwu, akụnụba na ulo oru injini na injinia nke nwere opekata mpe 4 nke ulo akwukwo, ma obu site na ulo akwukwo mmuta na Turkey na mba ofesi nke ndi ikike tozuru oke nabatara nha iru ya.
c) Enyere na nsonaazụ KPSS adabaghị dị ka usoro nke oge dị; KPSSP9, KPSSP11, KPSSP28, KPSSP33, KPSSP38, KPSSP43, KPSSP48, KPSSP1, KPSSP80 maka ndị gụsịrị akwụkwọ na sayensị akụ na ụba na nchịkwa, ozi ndọrọ ndọrọ ọchịchị, iwu na akụnụba na azụmaahịa. ka enwetara ọ dịkarịa ala isi XNUMX.
ç) 01 Jenụwarị agaghị abụ afọ iri atọ na ise dịka nke 2020
d) Onweghị ihe mgbochi ọ bụla na nyocha nke usoro ikpe.
e) Inwe ike ịrụ ọrụ na ijegharị na mba niile n'ihe gbasara ọnọdụ ahụike.
II. APKPỌ AKW ANDKWỌ AKW ANDKWỌ AKW ANDKWỌ NA AKW TOKWỌ TOB TOR TO TOB BER. ANYA
Ndị chọrọ akwụkwọ ga-achọ ịnwale ule; Onye isi oche anyị akwadebewo “Mpempe akwụkwọ Examslak Exam nke whichslak nke edepụtara na websaịtị gọọmentị (www.teftis.saglik.gov.tr) nke edepụtara, nke zuru oke ma zie ezi, asambodo KPSS, asambodo agụmakwụkwọ dị elu ma ọ bụ asambodo gụsịrị akwụkwọ, ma ọ bụrụ na ọ bụla, otu akwụkwọ asambodo. yana foto abuo 9 - 20 N'agbata Disemba 2019, Ministri Health Inspection Board Presence Bilkent Campus Üniversiteler Mah. Dumlupınar Boulevard 6001. SK. Mba: 9 Floor: 6 06800 ga-ezigara Çankaya / ANKARA na mmadụ site na mail / ụgbọ mmiri ma ọ bụ na ụbọchị izu n'etiti 09: 30-18: 00 ọrụ oge.
A ga-etinyerịrị akwụkwọ ndị ahụ edere n'elu na Board of Inspectors site na 20 Disemba 2019. Ngwa ndị na-erughi Onye isi oche n'ime oge a kara aka, nwere ihe ọmụma na akwụkwọ na-efu ma ọ bụ achọpụtaghị na ọ gaghị emezu ọnọdụ ahụ akọwapụtara, a gaghị anabata ya ma ọ gaghị elele ya. Willbọchị itinye akwụkwọ a ga-adabere n’ụbọchị na oge ịbanye na ngalaba akwụkwọ nke Ngalaba Na-ahụ Maka Ahụ Ike. A ga-enyeghachi ha akwụkwọ niile metụtara itinye ndị na-emezughị ọnọdụ nke itinye akwụkwọ maka arịrịọ ahụ.
III. AKACKỌ BRANCHES NA QUOTAS
Ndi akwukwo ndi choro igha maka uzo ha rue ugboro anọ akara ule nke etiti na ndi n’enye onye oru nyocha a ka aga akpo dika usoro ekekpebuputara site na ngalaba akwukwo kpebiri site na ngalaba nkuzi bidoro site na akara KPSS kachasi etinyere. Agbanyeghị, ndị oghere mmeri nke nwere otu akara dị ka onye ikpeazụ na-aga akwụkwọ nwere ike inweta ule ahụ.
Nkesa nke ndị ọrụ nyocha nke 16 na-ahụ maka usoro agụmakwụkwọ, oke, ọnụ ọgụgụ ndị aga-akpọ maka ule na ụdị akara KPSS dị ka ndị a;
Agụmakwụkwọ oke Onu ogugu ndi ochichi Isi KPSS
Sayensị Akụ na ụba na nchịkwa, sayensị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, Iwu,
Ikike nke Economics na Business Administrator 11 44 KPSSP9
Injinia oru 1 4 KPSSP1
Kọmputa Engineering 2 8 KPSSP1
Ọdịnaya obodo 2 8 KPSSP1
Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke akwụkwọ anamachọbi nke ngalaba agụmakwụkwọ kpebiri, ndị ọrụ nyocha nke ndị ọrụ nwere ike gbanwee mgbanwe na oke ahụ.
IV. NKWUPENTR PR INWETA N'AGBATA AK .TA
A ga-ekwuputa ndepụta ndị a ga - achọ ịnwe nnabata Ntinye akwụkwọ na ịntanetị na http://www.teftis.saglik.gov.tr. Agaghị eme ọkwa ọzọ maka ndị a na-aga ime. N'ime nyocha ahụ, a ga-edobe akara njirimara nke nwere nọmba NJ ma ejiri ya mee foto, dị ka asambodo ọmụmụ ma ọ bụ akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala, maka njirimara. Agaghị anabata ndị chọrọ itinye akwụkwọ ndị a n'ule ahụ.
V. Ebe na ụdị iru ule
N'ime usoro nke Iwu nke Nnyocha Ọrụ nke Ministry of Health, a na-enyocha ule, nke ga-ewe naanị ule nke ORAL, site n'aka Mịnịsta nke Nnyocha Ahụike Bilkent Campus Üniversiteler Mah. Dumlupınar Boulevard 6001. SK. Mba: Ala 9: 6 ga-eme na Çankaya / ANKARA.
VI. NKPỌTA NKPỌTA NSỌ
A) Ọmụmụ maka ule maka ndị gụsịrị akwụkwọ na sayensị na nchịkwa nchịkwa, sayensị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, iwu, akụnụba na ikike azụmaahịa;
1. Iwu usoro iwu (ụkpụrụ niile),
2. Iwu usoro iwu njikwa, ngalaba na-ahụ maka nhazi, nhazi ọrụ,
3. Iwu mpụ (ụkpụrụ ndị isi na mpụ obodo),
4. Iwu obodo (ụkpụrụ niile na ikike n'ụdị),
5. Iwu nke ọrụ (General ụkpụrụ),
6. Iwu azụmaahịa (usoro iwu),
7. Iwu nke usoro mpụ (ụkpụrụ ndị isi).
1. Usoro aku na uba (microeconomics, macroeconomics),
2. Akuko nke echiche aku na uba na nkuzi
3. Ego, akụ, akwụmụgwọ na njikọ,
4. Mmekorita aku na uba mba na otu,
5. Azụmaahịa azụmaahịa,
6. Nsogbu akụ na ụba ugbu a.
1. Usoro nkuzi gbasara izugbe na usoro iwu gbasara mmefu ego,
2. Mmefu ọha na eze,
3. Mmefu ego. d) Akaụntụ;
2. Nchịkwa na teknụzụ zuru ezu,
3. Akaụntụ Azụmaahịa.
d) Ohaneze, ugbu a na nke gbasara mmekọrịta akụ na ụba.
B) Maka ndi gụsịrị akwụkwọ na kọmpụta, ngalaba ọrụ na nke injinia nke injinia;
a) Ihe omumu banyere ihe omumu nke oma site na itule ihe ndi ozo n’ulo akwukwo, b) General, ihe ndi n’uwa ugbu a na ndi mmadu.
VII. EGO NA-EKWU EGO
a. Ihe omuma banyere ihe omuma banyere ule,
b. Iji ghọta ma chịkọta isiokwu, ike nke ikwupụta na ike iche echiche,
c. Mkpa, nnochite, kwesịrị ekwesị nke omume na mmeghachi omume na ndị ọrụ, the. Ntukwasi obi, ikwenye na ime ka mmadu kwenye
d. Onyinye n'ozuzu ha na omenaala ha
e. A ga-enyocha oghere nke mmepe sayensị na teknụzụ n'ụzọ nke akụkụ.
Kọmishọna ga-eleba anya na nhọpụta 50 maka mkpụrụedemede akwụkwọ (a), na 10 maka njirimara ọ bụla edepụtara na paragraf (b) ruo (e). Iji nwee ihe ịga nke ọma na nyocha ahụ, ọnụ ọgụgụ ogo nke akara ndị isi oche na ndị otu nyere ọkwa nke 100 zuru ezu ga-abụrịrị 70.
Nke Asatọ. RESKPỌTA NKPURUTA NA EKPERE NIILE EGO
Ntinye akara ule na ntinye aghaghi adi obere na 70 ka ewere ya dika onye nlere nyocha nyocha. N'ihe banyere ịha nha nke akara ule, nwa akwukwo nwere akara KPSS dị elu na-ebute ụzọ. Dabere na nsonaazụ nyocha ahụ, a ga-ekpebi ihe ịga nke ọma nke nnwale ahụ iche iche dabere na ngalaba agụmakwụkwọ ahụ, malite na nke onye na-eme ntuli aka na akara mmeri kachasị elu, a ga-ekpebi aha ndị isi na ndị ga-anọchi anya dịka ngalaba agụmakwụkwọ akọwapụtara na ọkwa ahụ.
A na-ekwuputa nsonaazụ nke ule ahụ na weebụsaịtị nke Onye isi ala, a na-amara ndị chọrọ ịme ntuli aka nọ na ndepụta izizi na ndozi. Nwa akwukwo a meriri na-efunari ikike ya ma o tinyeghi na ndi isi oche n’ime ubochi 15 site na ubochi ngosi A na-akpọ ndị ga-anọchi anya ha ka ha wee nwee ihe ịga nke ọma n'ime ọnwa isii nke ọkwa nke nsonaazụ nyocha ahụ karịa ndị a na-akpọ ndị na-esiteghị na ndị mbụ chọrọ maka nhọpụta ahụ ma ọ bụ ndị a họpụtaghị nakwa ndị na-amaliteghị ọrụ ahụ ma ọ bụ ndị gbara arụkwaghịm maka ihe ọ bụla. Ndi akwukwo ndi anabataghi maka oru a ma obu ndi ana edobeghi ma o bidoghi oru ha agaghi eche na ha tozuru oke.
A na-ebuso ndị isi oche nsonaazụ nyocha nke ntinye ọnụ n'ime ụbọchị ọrụ 5 na-amalite site na ụbọchị a na-ekwuputa nsonaazụ nsonaazụ ahụ. Onye isi oche na-aza ihe mgbochi n'etiti ụbọchị ọrụ 10.
IX. UZ O ISI
Nyochaa ndị na-achọ akwụkwọ achọtara achọpụtara na ha kwuru ụgha na akwụkwọ ntinye akwụkwọ na-ahụta na ha abaghị uru. A na-akagbu ha ọbụlagodi na enyere ha ọrụ. A na-eme mkpesa omempụ n'ụlọ ọrụ ndị ọka iwu na-ahụ maka ndị mmadụ ma ọ bụrụ na ha eduhie ụlọ ọrụ ahụ n'ụzọ dị otú a, a ga-agwa ha ọkwa na ụlọ ọrụ ebe ha na-arụ ọrụ.
A mara ọkwa n'ihu ọha.
Ministri Ahụike zụrụ Onye enyemaka pụrụ iche
Ministri ahia na teknụzụ iji zụrụ Pụrụ Iche Ọkachamara
Ministri nke ume na eke ihe iji zụta onye enyemaka pụrụ iche
Nweghachite nke onye nnyemaaka nke nyocha nke Ministry of Health
ENKA ka ya na Onye Mmekọ Bechtel wuo Highway na Serbia
Citizensmụ amaala na-ekwu ‘Ya Kanal Ma ọ bụ Istanbul’ na Kanal Istanbul EIA Report
Ememme Kartepe Winter-Karfest, njem na mmemme na-echere gị